स्वस्थ र सुन्दर कपालका लागि तेल आवश्यक छ । तर, कपालमा तेल लगाउने पनि तरिका हुन्छ । कपालअनुसार फरक–फरक तेल आवश्यक पर्न सक्छ । कसरी प्रयोग गर्ने तेल ? १, कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै कपालमा सबै तेलको प्रयोग फाइदाजनक हुँदैन । तेलका कारण कुनै साइड इफेक्ट नभए पनि नतिजा सकारात्मक.....
हस्त रेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातका रेखाले निर्धारण गर्ने बताउँछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यीनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । यहाँ हामीले धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखा कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं । जौको चिन्ह समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन ब्यक्तिको हातमा औंलाको जौ.....
शरीरका कुन यस्ता अंग पनि छन् जहाँ रौं भएको अशुभ मानिन्छ?
हस्त रेखा विज्ञानमा लामो र बाक्लो कपाल भएकी स्त्री सौभाग्यशाली हुने उल्लेख छ । छोंटो र कालो परेला हुने महिला पनि सौभाग्यशाली मानिन्छन् । तर शरीरका कुनै यस्ता अंग पनि छन् जहाँ रौं भएको अशुभ मानिन्छ । स्त्रीको हातमा रौं अशुभः हस्त रेखा विज्ञानका अनुसार जुन स्त्रीको हातमा रौं हुन्छ त्यस्ता स्त्री उग्र र.....